आजको राशिफल : २०७७ जेठ १७ गते - Sagarmatha Online News Portal
आजको राशिफल : २०७७ जेठ १७ गते
आज वि.सं. २०७७ जेठ १७ गते शनिवार । तदनुसार इ.स. २०२० मे ३० तारिख । नेपाल स्रवत ११४० तछलाथ्व । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष । अष्टमी, १७ः०८ उप्रान्त नवमी ।
अवसर आए पनि हडबडीले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ । विवादास्पद काममा जुट्नुपर्दा प्रतिफल प्रभावित हुनेछ । मिहिनेतको फल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् । काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला । बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ । मिहिनेत गर्दा केही राम्रो परिणाम पनि प्राप्त हुनेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ ।
पहिलेको संकल्प पूरा गर्ने समय छ । काममा राम्रो सुरुवात हुनाले सोचेको नतिजा हातलागी हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले विद्या र धन आर्जन हुनेछ । मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिनेछ । तर, परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा केही समय लाग्नेछ । अरूको मुख ताक्ने बानीले पनि काममा पछि परिएला ।
आफन्तसँग भेटघाट हुनाले परिवेश उल्लासमय रहनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । तर कामको अवसर आए पनि विशेष भेटघाट र शिष्टाचारमा अलमलिनुपर्ला । खानपानको असावधानीले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ ।
उपलब्धि प्राप्त गर्न केही कुरा त्याग्नुपर्ला । काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिहिनेतले आंशिक सफलता प्राप्त हुनेछ । फाइदा कमै भए पनि आँटेको काम सम्पादन हुनेछ । आफ्नो कमजोरी बाहिरिनाले आलोचकहरू बढ्न सक्छन् । अरूको उपकार गर्न सकिनेछ । तर धेरै समर्पणले पनि स्वाभिमानमा दाग लाग्न सक्छ । बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।
व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ । समयमा गम्भीर नबन्दा व्यर्थैमा दुस्ख पाइनेछ । स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । कामको चाप बढ्नेछ भने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि अलमल्याउन सक्छ ।